Dhalinyaro laga soo celiyay Mareykanka oo Thaabit ku dhegan | Baydhabo Online
Dhalinyaro laga soo celiyay Mareykanka oo Thaabit ku dhegan
Dhalinyaro 10-kii bishii hore ee March laga soo musaafuriyay dalka Mareykanka, ayaa si adag uga horyimid tallaabada Thaabit Cabdi Maxamed loogu magacaabo inuu noqdo Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho.
Thaabit Cabdi Maxamed, ayaa xilligan ku magacawnaa Kuxigeenka Safiirka Somaliya ee u fadhiya Magaalada Washington ee Xarunta Wadanka Mareykanka.
Nuur Maxamed Maxamuud oo ka mid ah dhalinta dib loogu soo celiyay Magaalada Muqdisho, ayaa Safiirka Somaliya ee Mareykanka, Danjire Axmed Ciise Cawad iyo Thaabit Cabdi Maxamed ku eedeeyay, in ay iyagu ka shaqeeyan tallaabada looga soo musaafuriyay dalkaasi.
Nuur Maxamed Maxamuud, ayaa sheegay in ay ka xumaadeen magacaabista Gudoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, isagoo intaa ku daray ka shakhsi ahaan in uuba ka naxay magacaabistiisa.
Nuur Maxamed Maxamuud, ayaa waxaa uu qeexay in dhaqaale badan uu kaga baxay aadistoodii Mareykanka, balse Thaabit Cabdi uu si sahlan dalka ugu soo celiyay.
Isagoo la hadlaayay Idaacadda Mustaqbal ee Magaalada Muqdisho, ayuu Safiirka iyo Kuxigeenkiisuba ku dhaliilay in aanay weli ka haynin wixii ay Dowladda Mareykanka ugu soo dhiibtay.
Nuur Maxamed, ayaa hoosta ka xariiqay in ay qaban qaabin doonaan dibadbax ay kaga soo horjeedan xilka cusub, ee Madaxweyne Farmaajo uu u magacaabay Thaabit Cabdi.
Nuur Maxamed oo ku celceliyay in ay ka xun yihiin xilka ninkan loo magacaabay, ayaa sheegay in ay taageero u hayaan Madaxweyne Farmaajo, ayna ugu baaqayan in dib uu uga laabto magacaabista ninkaasi.
Nuur, ayaa wuxuu Thaabit dusha kaga tuuray in maanta uu mustaqbal darro ku riday dhalinta labada boqol ku dhow, ee billihii January iyo February laga soo dejiyay Garoonka Aadan Cadde, isla-markaana aysan qaadan karin in maanta xil loogu darro.
C/laahi Maxamed Maxamuud oo isna ka mid ah dhalinta laga soo tarxiilay Mareykanka, ayaa eedayn kulul kala dul dhacay Thaabit Cabdi iyo Safiirka Somaliya ee u joogga Mareykanka.
C/laahi Maxamuud, ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya ugu baaqay inaanu lumin kalsoonida bulshada, isla-markaana uu ka fiirsado shakhsiyaadka uu xilalka u magacabayo.
Thaabit oo si dhow loola xiriiriyo Madaxweynihii hore ee Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaan soo dhawayn wanaagsan kala kulmin qaybaha bulshada, iyadoo Odayaal Dhaqameedyo sheegeen in aanu noqon karin Duqa Muqdisho.